inhliziyo ebuhlungu 2 | izindabazokubhebhana - peperonity.net
» inhliziyo ebuhlungu 2
inhliziyo ebuhlungu 2
Ayi angazi abantu besilisa baba nani.Izandla zabo uma zikuthinta kuba khona leyonto egijimayo emzimbeni.Kuqala ngangithi kwenzeka uma nithandana naloyo okuthintayo.Kodwa sengabona ukuthi akufanele uzisondeze kubantu besilisa bakuthintathinte ngalezozandla zabo ezilukhuni.Kodwa uma seziwenza umsebenzi ziyalifudumeza igazi.
Nami bengizitshena ukuthi lengane yesikole esilokhu ingidlalidlalisa ethangeni lapho kuqhewuke khona i'gown' angeke kube nasimanga.Uyazi ngithi ake ngithule nje ngibone ukuthi kuzogcinelaphi.Maye!Ingabe imsuke ngani ingane umuntu omdala impholishe ithanga bo!Uthisha wesikole sayo nokwenza.Okusho ukuthi ngi'hot 'ngizitshela ngaphakathi.
Ngisathule nginjalo lapho nami ingqondo yami ingasekho nakulomdlalo weBafana ebengiwubuka.Iyangipholisha phela ingane.Senyuke esinye isandla siye entanyeni.Ingipholishe ngesineke ngize ngiyifinyeze intamo."Aaah!".Ngibubulela phansi."Aaah Peter wenzani?"Nami ngisholo phansi inhliziyo ibe ithi ngaphakathi,"Sengathi ungaqhubeka wengane."
Angami umfana wesikole futhi angaphenduli.Kuphela nje athi ukuma kancane angapholishi kodwa isandla ebe esibeke entanyeni.Esinye sisethangeni.Aphinde aqhubeke nokungipholisha.Angidlalise intamo ngiyifinyeze futhi.Asisuse isandla ethangeni angipotoze amabele.Ngithi ngisakhamisa asifake isandla ngaphakathi kwi 'nightie'.Ngikhumbule ukuthi i'gown'yami ibithe qheke.Ngiqale ngokuvala amathanga kande ngiyibuyisele.Ubuye ubuye lowomuzwa okwabesifazane uma ubona ukuthi ingathi uzodliwa lana.Lowo muzwa owokunqaphaza ukhombise ukuthi awuthandi.
Ngithi ngisacabanga kanjalo ngizwe ngengane isingimunya ibele."Mmmmh!"Ngizwe ingquza yami imfoma umswakamo wokuqhanyelwa.Angincele umfana wesikole esinye isandla engipholisha kamnandi intamo.nakhu ngizodliwa umfana wesikole bo!Ingane elingana nezami izingane.
Asehlise umfana esinye isandla angidlalise ezinhlangothini.Awu angithinte kwamancane lapho umyeni wami angasazi nokuthi ikhona leyondawo.Nami impela indawo engingasayikhumbuli esengayikhohlwa ngoba ayithintwa nhlobo.Nansi ingane bo!
"Aaaah!"Ngisho ngikhushuza umfana engincela ibele.Kusenjalo ingane isehlise isandla ingithi faxa eqolo."Weeee!"Ngigxume ngizwe umsunu uthi bani!sengathi uyanyakaza.Angikwazi lokhu.Ukubanikelwa umsunu ngakugcina ngisafunda esecondary ngibhejwa isoka lami lokuqala.Manje nje uma ingquza isimanzi ngisuke sengiqhanyelwe ngiqedile.Sengilinde umthondo ungene phakathi.
Asehlise umfana isandla angiphulule ama hips kamnandi.Ngizwe sesigudla idolo.Asifake phakathi kwamathanga.Kuzenzakalele ukuthi ngiwavale.Sibhajwe phakathi kwawo.Athi uzama ukuqhubekela phambili esibunjini ngimbambe isandla sakhe ngisisuse.Ngibuye ngithi ukuntshontsha ngamehlo ebhulukweni lomfana wesikole.Usefile ukuqhanyelwa efuna ukubhebha umam wesikole sakhe.Ibhulukwe selimise elikhulu ithende.Futhi lengane!
Asiqinise isandla umfana ebe esangimunya ibele.lapho ingquza isimanzi te.nakhu ngizodliwa ingane igolo lami sengenqabe nalo kwabaningi abadala abahloniphekileyo!Futhi okwami!Ngithi ukuxegisa ukuqinisa isandla.Phela ingane lena ngizoyehlula ngamandla,bese ibuyela ezingqondweni zayo ihaqwe ngamahloni alokhu ekwenzayo kokufuna ukukhwela umuntu omdala onguthisha wayo.Kwanami angibambile amahloni.Angisasho lutho.Ngibuye ngithi ukucimeza ngenanele lobobumnandi besandla nokuncelwa ibele.
Ngokuxegisa isandla nje ingane ivele isithi shwi isandla siyobhajwa esibunjini.Buka nephenti angilifakile.Ngizwe iminwe emibili ingiqhweba umsunu osudumbe nokudumba.
"Waaa!"Ngizwa umsunu uthi bani.Awujukujele umunwe ophakathi nendawo engquza ka madam umfana."Wuuu"Lapho ngize ngiqethuke ingane ingikopa umunwe wayo ngiwuninda ngamajusi egolo eselixathuka ukuqhanyelwa.
Kukho lokho kucimeza obunobumnandi phakathi,angiqethule umfana.Ngingaboni nokuthi ulikhumule nini ibhulukwe.Ngimuzwe esengena ethi khaxa emethangeni ami.Awu!Yaze yangidla ingane.Ingabe izongigcina yini?
Ushelele kamnandi umthondo ngiwuzwa ungena engquza esimanzi,kuba nalokho kushisa kwawo.Iwuhlohle ingane uze uthi ngci ngamasende."Aaaaah!"Siquma sobabili.
Ngizithole sengifenda kanye nengane.Umfana angiqale slowly silokhu sifendana kamnandi.Umthondo ngiwuzwa ugcwala ingquza awushaye wonke size sithintane ngezinza.Imnandi lengane.bengithi izokhipha ucikicane womthondo.Lutho.Kumnandi impela.
"Wuuuuu...aaaaaaaah....mmmmmm"Sibubulela phansi umfana esengidla onke amakhona engquza yami.Aqale afende asheshise nobumnandi bube ngenye indlela."Awu wema...Awu wema!"Ingane ingikhalisa.Ngizithole sengiyibambe ngqi ngayikhava nangezidikadika zamathanga ami.Ayi kungibhebhe okomfana suka!"Wooo madam....maaaam!"Kuwushaye kuthi ngci ubhajwe ngamasende.Ngizwa kuhlasimula wonke umzimba ngibone ukuthi izochama lengane ingishiye kusemnandi kanje.
Kube sengathi iyama kancane.isuke ibe iwushaye 'corner to corner'Ngivele ngihayize lapho.ithi ngci1ngci!ubhajwe ngamasende iwuzungezise egolo ngidazuluke ngikhale ngilahlekelwe nayingqondo sengichama."Awu!...Peeeeeeeter!"Kulobomnandi obungachazeki ngizwe iqina ingane iba ugodo umthondo umthondo uthe nyi egolo."Weeeeee.....Maaaam!Maaaaam!Maaaaa....!!!"Ngizwe isidoda esishisayo sithi tsa!tsa!tsa!egolo.Umthondo ngiwuzwe sengathi uyagxuma phakathi egolo.ingquza yami ibophe iwuthi ngi umthondo.
► Inhiziyo ebuhlungu 3 (Next page)
◄ Inhliziyo Ebuhlungu (Previous page)